Phones | Net Guide | Page 2
Home Products Phones Page 2
Phones author 1 - March 2, 2020
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ မိုဘိုင်းစျေးကွက်ထဲက နောက်ဆုံးပေါ် iPhone တွွေထဲမှာ iPhoneX ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ iPhone XS လည်းပါရှိပြီး ၎င်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2018 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ 12 ရက်နေ့က စတင် တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် iPhcvone X နဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ အရွယ်အစား၊ မျက်နှာပြင်စွမ်းအား၊...
Premium Mid-Range စမတ်ဖုန်း Xiaomi Pocophone F1 ဟာ အဆင့်မြင့်မားတဲ့ Specs တွေကို ထည့်သွင်းထားပေမယ့် စျေးနှုန်းကလည်း သင့်တင့်မှုရှိတာကြောင့် သုံးစွဲလို့ကောင်းမွန်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးပါပဲ။ စက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ဘက်ထရီစွမ်းအားလည်း အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ GSM, HSPA0 နဲ့ LTE Network တွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး Hybrid Dual SIM...
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က ထွက်ရှိထားတဲ့ Xiaomi Mi CC9 Pro ဟာ နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပုံစံကလည်း သေသပ်လှပပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, CDMA, HSPA နဲ့ LTE Network တွေမှာ သုံးနိုင်ပြီး Nano Dual SIM ဆိုတဲ့ Version...
Phones author2- February 24, 2020
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 သြဂုတ်လလောက်က Realme ရဲ့နောက်ဆုံး မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Realme5နဲ့ Realme5Pro ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Realme5Pro ဟာ အဆင့်မြင့် Pro version ဖြစ်တဲ့အတွက် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Specs တွေနဲ့ features တွေကလည်း ပိုမိုအဆင့်မြင့်မားပြီး ဈေးလည်းပိုများပါတယ်။...
Realme5ကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 သြဂုတ်လလောက်က စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို GSM၊HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာသုံးနိုင်ပြီး Nano Dual SIM စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ 164.4 x 75.6 x 9.3 mm ရှိပြီး 198g လေးပါတယ်။...
Phones author 1 - February 24, 2020
Huawei ရဲ့ Huawei Nova3& Nova 3i ကို ဒီတစ်ပတ်မှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဖုန်းနှစ်ခုစလုံးမှာ Display ပိုင်းလည်း တူညီပြီး အခုခေတ်စားနေတဲ့ Notch ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစမတ်ဖုန်းတွေမှာ ရှေ့နောက်ကင်မရာပိုင်းတွေမှာ AI နည်းပညာကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး Fingerprint Sensor ကိုတော့ နောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး...
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 စက်တင်ဘာလလောက်က Realme ကနေ ၎င်းရဲ့ မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Realme XT ကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းအားကောင်းလျက်ရှိပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းဟာ ကင်မရာစွမ်းအား အလွန်ကောင်းမွန်သလို ဘက်ထရီစွမ်းအားလည်း မြင့်မားမှုရှိပြီး မျက်နှာပြင်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ စက်စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မြင့်မားတာကြောင့် ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ထိုက်တန်မှုရှိတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အလယ်အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပုံစံကလည်း...